China MP-SR01B fanamboarana sy orinasa | ISAPPARELA
Fomba: lobaka polo namboarina namboarina
Safidio ity akanjo ity: ampidino ny sary famantarana ny orinasanao na ampiaraho miaraka amina chinos roa ary manana fanamiana ho an'ny mpiasanao ianao. Izy ireo dia mety amin'ny mpamily fitaterana entana, mpiasa fikojakojana ary mpiasan'ny serivisy sakafo izay mafana isan'andro. Ary mbola mijery tsara ireo mpiasa mandany ny androny amin'ny latabatra iray ihany izy ireo. Fahaiza-miasa izany!
Teo aloha: T shirt fohy tanana fohy maina
Manaraka: T-shirt manjaitra tanany fohy lamaody
Polo mahazatra an'ny lehilahy ...
Akanjo golf golf miaraka amin'ny ...
Polo mahazatra ...